मूल्यवृद्धि फिर्ता गर - WorldWide Khabar
मूल्यवृद्धि फिर्ता गर
नेपाल आयल निगमले बुधबार पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँँ तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ७५ रुपैयाँले मूल्यवृद्धि गरेपछि जनता निराश बनेका छन । आज मूल्यवृद्धिले भयावह अवस्था निम्त्याएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिका कारण जनताको ढाड सेकिएको छ । उसै त बजारमा उपभोग्य वस्तुको भाउ अकासिँदा जनता रुने की हाँस्ने अबस्थामा छन । पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिले जनतामा आर्कोश थपिएको छ । मूल्यवृद्धि भएपछि खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर ७५ रुपैयाँले बढ्न जाँदा अब एक ग्यास सिलिन्डरको मूल्य १५ सय ७५ रुपैयाँ हुन गएको छ । पेट्रोल प्रतिलिटरको मूल्य १ सय ३६ रुपैयाँमा पुग्दा डिजेल मट्टीतेल प्रतिलिटर मूल्य १ सय १९ रुपैयाँ हुन पुगेको छ ।
आन्तरिकतर्फको हवाई उडानमा इन्धन प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ बढाएर १ सय १ रुपैयाँ पु¥याइएको छ । निगमले गत कात्तिक १२ गते मात्र तेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५० रुपैयाँले वृद्धि गरिसकेको थियो । एक महिनामा दुई÷दुईपटक मूल्य वृद्धि गरेर सरकारले के गर्न खोजेको हो ? यो गाइजात्रे शासनले जनता सन्तुष्टि छैनन् । मूल्यवृद्धि फिर्ता गर भन्दै विद्यार्थी संगठनहरु सडकमा छन् । सबै संगठनहरूले संघर्षको घोषणा गरिरहेका छन् । उनीहरुले शुक्रबार नेपाल आयल निगमको कार्यालय घेराउ गरेका थिए । एकातिर कोभिड महामारीका कारण आम नागरिक आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएका छन । यस्तो अवस्थामा मूल्य वृद्धि गर्नु राम्रो कुरा होइन । त्यसमाथि उपभोग्य वस्तु तथा पेट्रोलियम पदार्थमा बारम्बार मूल्यवृद्धि गर्दा जनता कसरी बाँच्ने ? सरकारले जनताको समस्या किन बुझन नसकेको ? देशले अझैं डरलाग्दो आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
महामारीले थलिएको देशको आर्थिक अवस्था नाजुक छ । मूल्यवृद्धिले सरकार जनताको पक्षमा काम गर्न असक्षम छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । सरकारले यसको समीक्षा बेलैमा गर्न जरुरी छ । बेलैमा मूल्यवद्धि फिर्ता गर्नतिर सरकारको ध्यान जान सकेन भने थप संकट निम्तन सक्ने खतरा पनि छ । आवधिक निर्वाचनमा यसको ठूलो असर पाँच दलीय गठबन्धन दललाई पर्ने देखिनेछ ।
यो कदम सरकार आफैका लागि पनि घातक छ । जनता सधै सरकारको अत्याचारलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनन् । एकै महिनामा दुईपटक मूल्यवृद्धि गरिनुको कारण सरकारले खुलाउनु पर्छ । मूल्यवृद्धि फिर्ता गरेर सरकारले जनताको मन जित्न सक्नु पर्छ । जनताको समस्या दिन प्रतिदिन बढदै छन । जनताको समस्या समाधान गर्ने कुरामा सरकार गम्भिर छैन । यसरी जनता माथि शोषण गरेर शासन गर्नु राम्रो होइन । जनता समस्यामा परे भने उनीहरुले बिद्रोह गर्न बाध्य हुने छन । बिगतको इतिहासबाट पाठ सिकेर सरकार अघि बढनु पर्छ । आफनो मनपरी गरेर सरकारले जनतालाई सधै सास्ती दिने काम गर्नु उचित होइन । जनताले तिरेको कर सहि रुपमा सदुपयोग हुनु पर्छ । राजनीति दल र तिनका नेताहरु मोटाउदै जाने जनता दुब्लाउदै जाने जुन किसिमको अबस्था देखिएको छ । यसले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन । अब राजनीति दल र तिनका नेतामा सुधार आउन जरुरी छ ।
Previous articleचलचित्र ‘कुईनेटो’को दोश्रो गीत ‘जलेको जल्यै छ यो मन’सार्वजनिक
Next articleदेश थला परेको छ
दसौं महाधिवेशनमा एमाले
एमाले पार्टीलाई ओलीले बनाए चलायमान
बुद्ध भूमि ट्याक्सी सेवामा नँया संचालक समिति,संयोजकमा गोबिन्द बहादुर कुवर
रेडियो कै इतिहासमा पहिलो रेडियो रियालिटी प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आयोजना हुदै
नेपालकी वरिष्ठ व्यूटिसियन मनिषा जिसीलाई दुवईमा अन्तराष्ट्रिय अवार्ड
सौन्दर्यकर्मी मन्जिला सुवेदीलाई सर्वोत्कृष्ट सौन्दर्यविदको अवार्ड
‘कन्हैया सिंह परियार संगीत पुरस्कार २०७८’ मा वरिष्ठ गायिका चन्द्रकला शाह पुरस्कृत
देश थला परेको छ
चलचित्र ‘कुईनेटो’को दोश्रो गीत ‘जलेको जल्यै छ यो मन’सार्वजनिक